Isikhathi sokukhushulwa yisikhathi sokuhamba phakathi komzuzu wokutheleleka kanye nokubonakaliswa kokuqala kwezimpawu zesifo. Isikhathi saso sokwelashwa ngalunye kuhlukile. Kodwa-ke, isikhathi sokukhushulwa kwesifo esisodwa singase sihluke. Lokhu kuxhomeke ngokuyinhloko ngenani lezinambuzane eziyingozi ezibangene emzimbeni, i-pathogenicity, isayithi lokutheleleka, futhi futhi, ngokungangabazeki, isimo somzimba jikelele senyama. Isikhathi sokugxila singadluliselwa ngenxa yokugoma, i-chemotherapy ne-seroprevention.
Ngezinye izifo, lesi sikhathi sokuphumula singumqondo kunalokho kunemibandela. Kulezi zifo, isibonelo, umkhuhlane. Isikhathi sokutshala (esilandelayo, esilandelayo), kulesi simo, sinenkinga kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi ngalesi sikhathi lesi sifo asibonakali noma yiziphi izimpawu. Ngaphezu kwalokho, ubude benkathi buxhomeke kuhlobo lwegciwane. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi ulalele izibikezelo zakho futhi uthathe izinyathelo zokuvimbela.
Ngokuvamile, isikhathi sokukhushulwa komkhuhlane singaphakathi kwezinsuku ezintathu nezinhlanu. Kulokhu, isimo sokuzivikela komzimba womuntu onegciwane kubaluleke kakhulu. Kubalulekile futhi ukuthi inani lezinambuzane lifinyelele.
Njengomthetho, isikhathi sokukhushulwa asihambisani nesiguli. Umuntu osulelekile izinsuku eziningana akazwa neze umonakalo obangelwa amabhaktheriya ngalesi sikhathi. Lokhu kubangelwa ukuthi abakaze bawandise. Le nqubo ivela emoyeni. Lesi sifo siqala ukuzibonakalisa lapho inani lezincikwane likhula ukuze isimiso somzimba sokuzivikela singakwazi ukubhekana nazo.
Ngenkathi yokukhiqiza igciwane, akukho zibonakaliso zesifo ezibonakalayo: ayikho ikhala eligijimayo, ama-aches emajoyini, emqaleni. Kumele kuqashelwe ukuthi esikhathini sokukhushulwa umuntu akakwazi ukuthelela umuntu. Lokhu kungenxa yokuthi ama-microbes angakafiki okwanele phezu komzimba.
Lapho amangqamuzana athunjwa yi-microbe eqala ukufa, ukutheleleka kuya phezulu. Kule nkathi izimpawu zesifo ziqala ukuthuthukisa. Ikhanda, umphimbo, izingxube ziqala ukulimaza, kuvela impumu egijima. Kumele kuqashelwe ukuthi ezinye izimpawu zibangelwa yi-virus ngokuqondile, kanti abanye, isibonelo, imfiva, ukukhathala - zicasulwa ngumzimba womzimba womuntu.
Ngenqubo yokukhululwa kwamangqamuzana afile, igciwane liqala ukuthelela inani elikhulu lamanye amaseli emzimbeni. Kulokhu, amasosha omzimba, ngokubona ukungasebenzi kahle esimweni, uqala ukuthatha izinyathelo zokuzivikela. Lokhu kuboniswa nje ekukhuphukeni kokushisa, isibonelo. Lesi sikhathi singathatha izinsuku eziningana.
Ngalesi sikhathi umuntu uba yingozi kwabanye, njengoba engakwazi ukuwabulala. Kulesi simo, kunconywa ukunciphisa ukuxhumana komguli nabanye abantu. Futhi, ngesikhathi sokugula umuntu kufanele abe nezinto ezithile (ipuleti, isipuni, indebe, ithawula, njll).
Abantu abaseduze nesiguli kumele bathathe izinyathelo zokuvimbela. Kukholelwa ukuthi yingozi kunazo zonke ngosuku olunegciwane ngaphambi kokuba izimpawu zokuqala zibonakale. Ngamanye amazwi, njengomthetho, isikhathi esiyingozi kakhulu ngosuku lwesine emva kokutheleleka.
Qinisekisa ukubiza udokotela ekhaya. Udokotela uzohlola futhi anikeze imithi edingekayo. Akunconywa ukuthi usebenze umkhuhlane noma uwenze ngezinyawo zakho. Lesi sifo singabangela imiphumela embi. Ngakho-ke, ngesikhathi sokuphulukiswa, ukuphumula nokuphumula kombhede kuboniswa. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukuba uthathe uketshezi oluthe xaxa.
I-pneumonia engenayo i-nosocomial: ama-pathogens, ukwelashwa nokuvimbela
Indlela yokuphumula i-sphincter ye-rectum? Spasm we-sphincter ye-rectum: izimpawu kanye nokwelapha
Yayiyini Russia phakathi kwekhulu XIX? Isifingqo "Amanothi we Hunter"
Isandiso - kuyinto ... Ingxenye yokukhuluma - isandiso. Russian: isandiso